Baahin: Axad, Oct 02, Weriye C/fitaax C. Geedi ~ Daljir ~ Galkacyo. Mudanayaasha baarlamaanka federaalka ah oo ka dooday muran in dhawaale hareeyey xeebta dheer ee baylahda ah ee Somaliya; Laba ciidan oo ka tirsan ciidanka dawlada federaalka ah oo isku-rasaaseeyey Dharkaynley; sarkaal ku dhintay is-rasaasaynta; Dr. Cali C/llahi Warsame oo tafaasiil ka bixiyey dhakhaatiir ajaanib ah oo hawlo caafimaad ka bilaabaya Garowe & Bossaso. – Radio Daljir
Baahin: Axad, Oct 02, Weriye C/fitaax C. Geedi ~ Daljir ~ Galkacyo. Mudanayaasha baarlamaanka federaalka ah oo ka dooday muran in dhawaale hareeyey xeebta dheer ee baylahda ah ee Somaliya; Laba ciidan oo ka tirsan ciidanka dawlada federaalka ah oo isku-rasaaseeyey Dharkaynley; sarkaal ku dhintay is-rasaasaynta; Dr. Cali C/llahi Warsame oo tafaasiil ka bixiyey dhakhaatiir ajaanib ah oo hawlo caafimaad ka bilaabaya Garowe & Bossaso.
Oktoobar 2, 2011 12:00 b 0
Shir looga arrinsanayo samaynta santuukh kayd dhaqaale oo uu yeesho gobolka Nugaal oo maanta Garowe lagu qabtay.
Xafiiska imtixaanaadka ee Puntland oo baahiyey tirada, magacyada & gobollada ay ka kala yimaadeen 55-ka arday ee ku guulaysatay deeqda waxbarasho.